उपसभामुखलाई हटाउन नेकपाले महाअभियाेग लगाउन सक्ला? – Hotpati Media
उपसभामुखलाई हटाउन नेकपाले महाअभियाेग लगाउन सक्ला?
२७ पुष २०७६, आईतवार १९:५७ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडौं-उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुँदै उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
नेकपाभित्र सभामुखको टुंगो नलागिरहेका बेला पदबाट राजीनामा नदिने उनको अडानले नेकपाभित्र यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।उपसभामुखमा तुम्बाहाङ्फे कायम रहँदा नेकपाले सभामुख पाउने छैन । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख नेकपाकै मानिने हुँदा सभामुख अर्को दलको भागमा पर्नेछ । उसो त तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन पनि उनले राजीनामा भने दिनैपर्ने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।सभामुख नछाड्ने नेकपाको निर्णय र उपसभामुखबाट राजीनामा नगर्ने तुम्बाहाङ्फेको अडानले प्रतिनिधिसभा बैठक थप अन्योलमा परेको छ ।
संसदको बैठक तीनपटक सरिसकेको छ । आइतबार बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरेरै माघ ६ गतेका लागि सारिएको छ ।यसअघि पुस ११ गते र १६ गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगन गरिएको थियो । आइतबार बैठक स्थगन गरिएको तेस्रो पटक हो ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले नेकपाभित्र सभामुखका विषयमा सहमति नभएसम्म राजीनामा नदिने पूर्वएमाले स्रोत बताउँछ । पूर्वएमाले सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने पक्षमा देखिँदैन । पूर्वमाओवादीले पनि सभामुख लिने अड्डी कस्दा सभामुखको विषय झनै पेचिलो बनेको हो ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग लगाए पनि सामना गर्ने चेतावनी दिइसकेकी छन् । उनले भनिन्, “‘सक्छन् भने महाअभियोग लगाउन् । मलाई कुनै चिन्ता छैन ।’’महाभियोगबाहेक उपसभामुख हटाउने अर्को विकल्प पनि नेकपासँग छ । ‘निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा’ उपसभामुख पद रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगलाई दलले समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्न सक्छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “समानुपातिक सूचीमा रहेको नाम हटाउन दलले निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउन सक्छ । तर, त्यसरी रिक्त हुने स्थानमा जुन क्लस्टरबाट पहिला पठाइएको थियो त्यही क्लस्टरबाट नाम पठाउनुपर्छ ।”